Dowlad goboleed ku taageeray dowlada dhexe hagida siyaasada dibeda * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowlad goboleed ku taageeray dowlada dhexe hagida siyaasada dibeda
By A warsame	 On Sep 22, 2017
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in dowlada dhexe ay awood dastuuri ah u leedahay iney hagto siyaasada arrimaha dibeda ee Somalia.
Waxaa uu ku taliyay in la dhowro dastuurka dalka u yaalla oo uu xusay inuu qeexayo awoodaha dowlada dhexe iyo Maamul goboleedyada kala leeyihiin, isagoo tilmaamay iney haboon tahay arintaas inaan hadda xiisad laga abuurin.
“Hagida siyaasada arrimaha dibeda waxaa iska leh dowlada dhexe doorka uga furan maamul goboleedyada waa talo bixin iyo farsamo.”ayuu yiri Madaxweyne Waare oo la hadlay idaacada VOA.
“Mowqifka dhexdhexaadnimada ah ee dowlada Federalka ka qaadatay arrimaha Bariga Dhexe way wanaagsanaan lahayd in labada dhinac ee iskhilaafsan ay ku qanacsan yihiin balse haddii hal dhinac uu ku qanacsan yahay waa arin arrin aan wanaagsanayn” ayuu sidoo kale yiri Madaxweyne Waare.
Hadalka madaxweynaha Hirshabelle ayaa ku soo aadaya xili xiisada ka taagan khaliijka ay klhilaaf cusub ka dhex abuurtay dowlada dhexe iyo dowlada goboleedyada hoos taga.
Maamulada Puntland, Galmudug iyo Koonfur galbeed ayaa si cad u sheegay iney taageersan yihiin xulufada Sacuudiga ee xiriirka u jaray Qatar, iyagoo dowlada dhexe ugu baaqay iney bedesho mowqifka dhexdhexaadnimada ah ee ay aarintaas ka qaadatay.
Dowlad goboleedyada qaar sida Galmudug ayaa dhexdooda ku sii kala qeybsamay ka dib markii madaxdooda ugu sareysa ay qaarna taageereen mowqifka dowlada dhexe, qaar kalena ka soo horjeesteen.
Somalia:Regional State supported state led overseas policy in Gulf crisis